Waraysiyada, 31 July 2019
Arbaco 31 July 2019
Muranka Tirakoobka Maraykanka Muxuu Salka Ku Hayaa
Dallkan Maraykanka waxaa socoto diyaarinta tirakoobka dadka ku nool Maraykanka oo 10-kii sanoba mar la qabto. Tirakoobkan oo la sameyn doono sanadka 2020-ka ayaa waxaa hareeyay khilaaf ku saabsan in su’aalaha dadka la weydiinayo lagu daro in qofku yahay muwaadin iyo in kale.
Tartan Quran Aqris oo Lagu Qabtay Mineaplis
Tarntan quraan aqris ah oo ay soo qaban qaabiyeen culimo iyo waxgarad u badan Soomali oo ku nool magaalada Mineaplis ee gobolka Minesota ayaa xalay lagu qabtay magaalad minaplis. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galay arday u badan Soomaali oo kala timid gobolka Maraykanka.
U.S. iyo China oo Ku Kala Tagay Kulankoodii Ganacsiga ee Washington
Kulan xagga ganacsiga ah oo ay Dowladaha Maraykanka iyo Shiinaha ku laheeyeen Magaaladan Washington ayaa ku soo gaba-gaboobay heshii la’aan
Wiil Soomaali ah oo Deeq Waxbarasho ka Heley Jaamacada Yale
Denmark oo Shuruuc ka Soo Saartay Muhaajiriinta
Dalka Denmark ayaa soo saaray sharci cusub oo ku qasbaya dadka qaadanaya dhalashada dalkaasi in maalinta la dhaarinayo ay gacan-qaadaan mas’uuliyiinta guddoonsiinaysa dhalashada.
Wareysi: Wasiir Cabdifataax Geesey
Wasiirka Howlaha Guud ee dowladda Somalia, Cabdifitaax Geeseey ayaa wareysi uu siisay VOA ku sheegay inuuu xilkaasi iska casilay, kadib markii sida uu sheegay ay dowladdu faregelin ku sameysay doorashada Koonfur Galbeed, sidoo kalena ay soo xirtay Mukhar Roobow.
Madaxweyne Trump oo Wareysi Siiyay VOA
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa si weyn usoo dhoweeyey heshiiska baayac-mushtarka saddex-geesoodka ah ee uu la saxiixday hoggaamiyayaasha waddamada Mexico iyo Kanada maalintii shalay.
Wareysi: Guddoomiyaha baarlamanka Soomaaliya
Gudoomiyaha Barlamanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa markii ugu horeysey ka hadley kala diristii guddiga maaliyada baarlamanka ee uu sameeyey gudfoomiye ku xigeenkiisa koowaad.
Qeybtii labaad wareysiga madaxweyne Xasan Sheekh
Qeybta labaad ee wareysiga uu siiyey VOA, waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh uga hadlayaa isbeddelada siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika iyo xiisadda khaliijka (Halkan ka dhageyso)
Wiil Soomaali ah oo Lagu Dilay Toronto
Waxaa shalay subax magaalada Toronto ee dalka Canada, gaar ahaan xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay ee Weston and Lawrence, lagu dilay wiil Soomali ah oo da’diisa lagu sheegay 30 jir. Wiilkan ayaa magaciisa la yiraahdaa Kaafi Bashiir Bahweyn.
Shirka Luqadda iyo Dhaqanka Af-Maayga Soomaaliyeed
Khubaradii iyo aqoonyahankii ka qayb galay kulanka sanadlaha ah ee dhowaan ka dhacay magaalada Boras ee dalka Sweden ayaa soo saarsy war-murtiyeed ka kooban toddobo qodob.